कांग्रेसका प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसको भविश्य बारे के भन्छन् त ? - Enepalese.com
कांग्रेसका प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसको भविश्य बारे के भन्छन् त ?
इनेप्लिज २०७५ कार्तिक १७ गते ११:२५ मा प्रकाशित
टेक्सास, गत निर्बाचनमा नराम्रो हार ब्यहोरेर कमजोर प्रतिपक्ष बनेको नेपाली कांगे्रस यतिबेला आन्तरिक द्धन्दमा फसेको देखिन्छ । दुई ठुला कम्युनिष्ट एक भएपछि अब कांग्रेसको भविश्य के होला त ? धेरैको चासो भएको यो बिषयमा केहि समय पहिला अमेरिकामा आउंदा कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् र्चिर्चत युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर कुरा गरेका छन् ।
कार्यक्रम यु स्टाट अगेनका लागि पत्रकार सूर्य थापासंग कुरा गर्दै नेता शर्माले कांग्रेस बलियो हुने र भविश्य राम्रो भएको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसको आन्तरिक द्धन्द चांडै समाधान हुने नेता शर्माको बिश्वास छ ।
कांग्रेसको नेतृत्व, युवाहरुको भविश्य, जनसम्पर्कहरुको लडाई किन भईरहन्छ ? बिदेशमा रहेका नेपालीहरुका बारेमा कांग्रेसको सोचाईको बारेमा गरिएको कुराकानी यस कार्यक्रममा हेर्न सकिन्छ ।